Hotel McAlpin miaraka amin'ny orkesitra sy hopitaly misy azy
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hotel McAlpin miaraka amin'ny orkesitra sy hopitaly misy azy
Ny Hotel McAlpin dia namboarina tamin'ny 1912 avy amin'ny Jeneraly Edwin A. McAlpin, zanakalahin'i David Hunter McAlpin. Ary koa amin'ny maha-trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra an'izao tontolo izao, dia izy io ihany koa no iray amin'ny rendrarendra indrindra.
Tany amin'ny faramparan'ny taona 1912, raha efa saika vita ny fanamboarana, amin'ny rihana 25 no hotely lehibe indrindra manerantany.
Ny Hotel McAlpin dia namboarina miaraka amina gorodona voafaritra tsara sy miralenta 2 ary rihana iray nantsoina hoe "fahenina ambin'ny folo fahenina torimaso" ho an'ny mpiasa amin'ny alina.
Tamin'ny alin'ny Noely 1916, tovovavy iray 19 taona no niharan'ny herisetra ara-nofo sy nokapohin'ny mpanafika izay nanofa efitrano 2 amin'ny lafiny roa amin'ny efitranony mba hampanginana ny kiakiaka.
Ny fampitaovana ao amin'ny Hotel McAlpin dia nahavariana satria nahavelona toy ny fandroana Tiorka goavambe sy ny dobo filomanosana amin'ny rihana faha-24. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia nanana orkesitra anatiny, ary koa hopitaly feno fitaovana.
Rehefa nanakaiky ny fahavitan'ny faran'ny 1912 ny trano fandraisam-bahinin'ny Hotel McAlpin tany New York dia naneho hevitra ny The New York Times fa avo dimy hetsy ny velarana misy azy ka “toa tafasaraka amin'ireo trano hafa” izy io. Manome mpiasa 1,500 ny hotely, afaka mandray vahiny 2,500 13.5 izy. Niorina tamin'ny vidiny $ 358 tapitrisa ($ XNUMX tapitrisa androany). Ny trano fandraisam-bahiny dia namboarin'ny mpanao mari-pahaizana malaza Frank Mills Andrews izay nahitana gorodona roa manokana: ny vehivavy manamarina ny trano fandraisam-bahiny dia afaka mitazona efitrano iray amin'ny gorodona tokana ho an'ny vehivavy, mandingana ny lobby ary miditra mivantana amin'ny gorodony. Ny rihana iray hafa, nantsoina hoe "fahenina ambin'ny folo fahenina," dia natao ho an'ny mpiasa alina izay nangina nandritra ny andro. Ny hotely koa dia nanana masoivohon'ny fizahan-tany manokana.
Ny McAlpin dia nanitatra fanitarana antsasaky ny folo taona taty aoriana. Ny tompon-trano dia nividy zaridaina dimampolo metatra fanampiny teo amin'ny làlana Thirty-Fourth Street roa taona talohan'izay. Ny fampidirana vaovao dia nitovy refy tamin'ny tranobe nisy rihana dimy amby roapolo tany am-boalohany, ary nanome efitrano roanjato fanampiny, ascenseur efatra hafa, ary efitrano fandefasana baolina lehibe iray. Ny fanavaozana lehibe mitentina 2.1 tapitrisa dolara dia vita tamin'ny taona 1928 namelombelona ny efitrano rehetra, nametraka fandroana maoderina ary nanavao ny ascenseur.
Ny fianakavian'i McAlpin dia nivarotra ilay trano fandraisam-bahiny tamin'ny 1938 tamin'ny Jamlee Hotels, notarihin'i Joseph Levy, filohan'ny Crawford Clothes, mpampiasa vola malaza any New York mitentina 5,400,000 1,760,000 1952 $. Jamlee dia voalaza fa nanangona vola $ 15 fanampiny tamin'ny fanavaozana. Nandritra ny fananana an'i Jamlee, ny hotely Knott Hotel dia nitantana hatramin'ny 1954 rehefa noraisin'ny Tisch Hotel Company ny fitantanana. Tamin'ny 9,000,000 Oktobra 8 dia namidin'i Jamlee tamin'ny Hotely Sheraton Hotel $ 1959 ilay trano fandraisam-bahiny ary nantsoina hoe Sheraton-McAlpin. Nohavaozin'i Sheraton tanteraka ilay hotely dimy taona taty aoriana ary nomeny anarana hoe Sheraton-Atlantic Hotel tamin'ny 28 Oktobra 1968. Namidin'i Sheraton ilay trano fandraisam-bahiny tamin'i Sol Goldman sy Alexander DiLorenzo tamin'ny 7.5 Jolay 1976 $ 700 tapitrisa ary niverina tany amin'ny Hotel izy io Anaran'i McAlpin. Sheraton dia namerina indray ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny XNUMX, tamin'ny alàlan'ny tsy fividianan'ny mpividy azy, ary namidiny haingana ilay mpandraharaha William Zeckendorf, Jr. izay nanova ny McAlpin ho trano fanofana XNUMX ary nanonona azy ireo ny Herald Square Apartments.
Tamin'ny Alin'ny Krismasy 1916, Harry K. Thaw, vadin'i Evelyn Nesbit taloha ary mpamono ny mpanao mari-trano Stanford White, dia nanafika an'i Fred Gump, Jr, 19 taona, tao amin'ny efitrano malalaky ny rihana faha-18. Nitaona an'i Gump tany New York i Thaw niaraka tamin'ny fampanantenany asa fa kosa nanao herisetra taminy ary nokapohiny tamin'ny karavasy feno tototra mandra-poka ra. Araka ny voalazan'ny New York Times, Thaw dia nanofa efitrano roa tamin'ny lafiny roa tamin'ny efitranony mba hampanginana ny kiakiaka. Ny ampitson'io dia nitondra an'i Gump tany amin'ny aquarium sy zoo ny mpiambina an'i Thaw talohan'ny nahatafavoaka ilay zazalahy. Ny rain'i Gump dia nitory an'i Thaw $ 650,000 noho ny "hatezerana lehibe" niaretan'ny zanany lahy. Nalamina tany ivelan'ny fitsarana ny raharaha nony farany.